warkii.com » Paul Pogba Oo Magacaabay Afar Ciyaartoy Oo Manchester United Ka Tirsan Oo Uu Daawashadooda Ku Raaxaysto
Paul Pogba Oo Magacaabay Afar Ciyaartoy Oo Manchester United Ka Tirsan Oo Uu Daawashadooda Ku Raaxaysto
Xiddiga reer France ee Paul Pogba ayaa magacaabay afar ka tirsan ciyaartoyda Manchester United oo uu tilmaamay inay leeyihiin xirfad qurux badan oo weerar ah, kuwaas oo uu ku raaxaysto inuu daawado marka ay ciyaarayaan.
Pogba oo kasoo laabtay dhaawac muddo dheer qaatay, waxa uu qayb ka ahaa kooxdiisa intii dib loo bilaabay horyaalka oo ay Red Devils wacdaro ka dhigaysay horyaalka Premier League, isla markaana ay hal kulan oo kaliya barbarro gashay.
Kubbad-sameeyahan oo ka maqnaa kooxda waqtigii uu Bruno Fernandes yimid, waxay dib isku heleen dhamaadka bisha June oo ay markii ugu horreysay iska garab ciyaareen, waxaana uu isaga oo garoonka ku jira ama bannaankiisaba jooga ku raaxaystaa afar ciyaartoy oo bandhiggoodu cajiib yahay.
27 jirkani waxa uu xusay in Bruno Fernandes, Anthony Martial, Marcus Rashford iyo Mason Greenwood ay bandhig layaab leh muujinayaan, daawashadooduna u abuurto farxad weyn, waxaanu yidhi: “Way i farxad gelisaa inaan ka dambeeyo iyaga. Waan ka helaa daawashada Bruno, Rashford, Martial iyo Mason oo dhamaantood ciyaaray kulankii u dambeeyey, iyo inaan arko iyagoo dhalinaya goolasha.”
Pogba oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi: “Kaliya waa inaad sacabka u garaacdo, way qurux badan tahay… mar kasta oo ay kubadda ciyaarayaan way i farxad geliyaan.”
Xiddiga reer France waxa uu sheegay in shaqsiyan uu kubadda u arko in weerar uu qaado, difaacana uu sameeyo, mar kasta oo uu garoonka ku jirana uu sidaas ku fikiro si uu kooxdiisa u caawiyo.
SACIID DENI oo hal arrin ka codsaday xildhibaanada BFSeptember 22, 2020